भारी मतले विजयी भए भट्ट Globe Nepal News Portal
काठमाडौं,असोज ३१ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को अध्यक्षमा जापानका भवन भट्ट भारी मतका साथ विजयी भएका छन् । राजधानीमा सम्पन्न एनआरएनको आठौँ विश्व सम्मेलनको क्रममा भएको नयाँ नेतृत्व चयनमा भट्टले आफ्ना प्रतिष्पर्धी निवर्तमान अध्यक्ष शेष घलेकी पत्नी जमुना घले गुरुङलाई दुई गुणाभन्दा बढी मतको अन्तरले पराजित गर्दै आफुलाई निर्वाचित गराएका हुन् । करीब ६० देशका कूल १ हजार ८ सय ५४ मतदाता मध्ये १ हजार ७ सय ८८ जनाले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान गरेका थिए । जसमध्ये भट्टले १ हजार १ सय ९७ मत प्राप्त गरे भने जमुना घलेले ५ सय ८४ मत मात्र प्राप्त गरिन् ।
निर्वाचित भए लगत्तै अध्यक्ष भट्टले चुनावमा हारजित स्वाभाविक भन्दै सबैलाई एकढीक्का बनाएर काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । भट्ट आफुले मात्र चुनाव जितेका छैनन्,उनको टीमबाट चुनावी मैदानमा रहेका प्राय: सबैले चुनाव जितेका छन् ।
२० वर्ष अगाडि अध्ययनको लागि जापान पुगेका भट्ट एनआरएनएमा दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष र एक कार्यकाल कोषाध्यक्ष भएर काम गरिसकेका छन् । जापानमा रेष्टुरेन्ट व्यवसायमा सफल मानिएका भट्टको २९० वटा रेष्टुरेन्ट रहेका छन् । जसबाट वार्षिक ३५ अर्बको कारोबार हुने गरेको छ । व्यवसायिक समुह टिबिआईका अध्यक्ष रहेका भट्टको नेपालमा पनि उद्योग,संचार,कलेज लगायतका क्षेत्रमा लगानी रहेको छ।
गोरखामा जन्मिएका भट्ट एनआरएन अभियानमा सुरुवातदेखि सक्रिय थिए । जापानमा एनआरएनको समन्वयन समिति गठन देखि जापान अध्यक्ष हुँदै एनआरएनएको कोषाध्यक्ष र दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष हुँदै भट्ट अध्यक्ष बन्न सफल भएका हुन् ।
क-कसले जिते निर्वाचन ?
निवर्तमान उपाध्यक्ष भवन भट्टले अब ७८ देशमा फैलिएको एनआरएन संगठनको दुई वर्ष नेतृत्व गर्नेछन् । आठौँ विश्व सम्मेलनबाट निर्वाचित हुने अन्य पदाधिकारीहरुमा उपाध्यक्षद्वयमा जर्मनीका कुमार पन्त र बेलायतका कुल आचार्य र महिला उपाध्यक्षमा अष्ट्रेलियाकी रन्जु थापालाई पराजित गर्दै रुसकी सपिला राजभण्डारी निर्वाचित भएकी छिन् । महासचिवमा रुसका डाक्टर बद्री केसी निर्वाचित भएका छन् । उपाध्यक्ष पन्त र महासचिव केसी दोश्रो कार्यकालका लागि पूर्ववत पदमा निर्वाचित भएका हुन् ।
दुई सचिवमा डिबी क्षेत्री र जानकी गुरुङ विजयी भएका छन् भने कोषाध्यक्षमा हिक्मत थापा दोश्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका छन् । यसैगरी, सहकोषाध्यक्षमा सोम सापकोटा निर्वाचित भएका छन् । महिला संयोजकमा भूमादेवी लिम्बु निर्वाचित भएकी छन् । युवा संयोजकमा सुदन थापा निर्वाचित भएका छन् ।
सन् २००३ मा स्थापना भएको एनआरएनमा २१ जनाको कार्यसमिति हुन्छ । उक्त समितिभित्र छ वटा क्षेत्रीय, महिला र युवा समितिको संयोजक र उपसंयोजक रहने व्यबस्था छ ।
कसले कति मत ल्याए ?
उपाध्यक्षमा दोहोरीएका कुमार पन्तले एक हजार ३० मत पाएर बिजयी भए भने अर्को उपाध्यक्षमा निर्वाचित कुल आचार्यले ६ सय ४४ मत पाए ।
उपाध्यक्षका अन्य पराजित प्रत्यासी चिरिञ्जीबी थापाले ३ सय ८०, खगेन्द्र क्षेत्री ३ सय ४९, सोनाम लामा ४ सय ३६ तथा रबिना थापाले २ सय ६४ मत प्राप्त गरिन् । महिला उपाध्यक्षमा निर्बाचित राजभण्डारीले एक हजार ५४ मत प्राप्त गरिन् ।
महासचिवमा पुन डा बद्री केसीले ७ सय ६७ मत ल्याएर विजयी भए भने प्रतिद्धन्द्धीहरु यम कुमार गुरुडले ५ सय ३८ र अर्जुन श्रेष्ठले ३ सय ६४ मत ल्याएका छन ।
त्यसैगरी २ सचिव पदका लागि भएको निर्वाचनमा सचिवमा डम्बर बहादुर क्षेत्री ६ सय ६ र जानकी गुरुड ६ सय ५५ मत ल्याएर विजयी भएका छन भने सचिवका अन्य उम्मेदवारले क्रमश गणेश केसीले ६ सय ५३, डा देवी बहादुर बस्नेतले ३ सय २१, ऋषिराम कडेलले १ सय ९ र सन्तोष भट्टराईले ४ सय ९७ मत ल्याएर विजयी भएका छन ।
कोषाध्यक्ष पदमा हिक्मत बहादुर थापाले एक हजार ३८ मत ल्याएर विजयी भएका छन भने उनका प्रतिद्धन्दी मुछेत्र गुरुडले ६ सय ५३ मत ल्याएका छन ।
सहकोषध्यक्षमा सोम सापकोटाले एक हजार २४ मत ल्याएर विजयी भएका छन भने प्रतिद्धन्द्धी चक्र बहादुर थापाले ५ सय २६ मत ल्याएका छन । त्यसैगरी महिला संयोजकमा रजनी प्रधानले ९ सय २ मत ल्याएर विजयी भएकी छिन भने प्रतिद्धन्द्धी भोमा लिम्बुले ६ सय ७६ मत ल्याएकी छिन । युवा संयोजकमा सुदन कुमार थापाले ४ सय ९७ मत ल्याएर विजयी भएका छन भने लोक राज शर्माले ३ सय ९ , स्वतन्त्र प्रताप शाहाले ४ सय ९०, र दिपक वलीले २ सय ७९ मत ल्याएका छन ।
त्यसैगरी क्षेत्रीय संयोजकहरुमा अमेरिका क्षेत्रबाट संयोजकमा गौरीराज जोशीले एक सय १८ मत ल्याएर विजयी भएका छन भने नविन शेरचनले ७५ मत ल्याएर विजयी भएका छन । अमेरिका क्षेत्रको महिला उपसंयोजकमा संगीता लम्साल सिवाकोटी निविरोध भएकी छिन भने युवा संयोजकमा डा बर्षा मोक्तान पनि निर्विरोध भएकी छिन ।
यूरोप क्षेत्रबाट संयोजकमा शिव प्रसाद बरुवालले १ सय ४२ मत ल्याएर विजयी भएका छन भने दुई उपसंयोजक पदमा एकराज गीरिले १ सय ४४ मत र गोविन्द गौतमले २ सय ४ मत ल्याएर विजयी भएका छन ।
युरोपबाट महिला उपसंयोजकमा संगीता मरहट्टाले ३ सय ११ मत ल्यायी विजयी भएकी छिन भने यूवा संयोजकमा जयकृष्ण ठाकुर निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
ओसियानाबाट संयोजकमा धर्मराज अधिकारीले ८४ मत ल्यायी विजयी भएका छन भने उपसंयोजकमा ईश्वर कुईकेल र लोकनाथ पौडेलले १, १ मत पाएका थिए । गोला प्रथाबाट परिणाम घोषणा गरिने निर्वाचन आयोगले जानएको छ । महिला उपसंयोजकमा प्रीति शर्माले ९८ मत ल्याई विजयी भएका छन् । ओसिनीयाबाट युवा संयोजकमा ऋषिराम आचार्यले १ सय ४ मत ल्यायी विजयी भएका छन्।
एसिया प्यासिफिकबाट संयोजकमा किरण विक्रम थापाले एक सय २९ मत ल्यायी विजयी भएका छन भने २ पदका लागि भएको उपसंयोजकमा विनोद कुंवरले एक सय ४५ र पारशमणी शर्माले एक सय ५३ मत ल्याएर विजयी भएका छन । एसिया प्यासिफिकबाट महिला उपसंयोजकमा जुनुमाया गुरुड र निर्विरोध भएकी छिन भने युवा संयोजकमा कुनै उम्मेदवारी नै परेको छैन ।
अफ्रिकाबाट संयोजकमा सुनिल कार्की निविरोध भएका छन भने २ उपसंयोजक पदका लागि डा भुवन ढकाल र शिव शर्मा पौंडेल निर्वाचित भएका छन । महिला संयाृजकमा मनकला विष्ट थापा र युवा संयोजकमा बाबुराम लुईटेल निर्विरोध निर्वाचीत भएका छन ।
मिडिल ईष्टबाट क्षेत्रिय संयोजकमा राजेन्द्र शर्माले २ सय ६९ मत ल्याएर विजयी भएका छन भने उपसंयोजकमा गोपाल कडेल र हंसराज ढकाल निविरोध निर्वाचित भएका हुन् । महिला उपसंयोजकमा यासयीन बेगम निर्विरोध निर्वार्चित भएका छन भने युवा उपसंयोजकमा राजकुमार बस्नेत निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।
Bhaban Bhatta Bhawan Bhatta NRN ICC